IMIBALA YEPEYINTI EMHLOPHE EGQWESILEYO YEEKHABHATHI EZIKHITSHINI - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Imibala yepeyinti emhlophe egqwesileyo yeeKhabhathi eziKhitshini
Imibala yepeyinti emhlophe egqwesileyo yeeKhabhathi eziKhitshini
Apha sabelana ngokukhetha kwethu imibala yepeyinti emhlophe yeekhabhathi zasekhitshini.
Ngaba iikhabhathi zakho zasekhitshini zikhangeleka zicocekile kwaye zifuna ukuvuselelwa? Okanye ngaba uyagula ziikhabhathi zeenkuni ezimnyama nezimnyama? Lixesha lokuba uziphose uze upeyinte ezo khabhathi zimhlophe.
Ipeyinti emhlophe ibonisa ukukhanya, ikhanyisa ikhitshi lakho. Kodwa ayidinisi? Hayi! Yinto yakudala. Iikhabhathi zakho zasekhitshini akufuneki zibe yindawo ekugxilwe kuyo yoyilo lwakho lwekhitshi, endaweni yoko ziyayixhasa kwaye ziyomeleza. Imhlophe, ehambelana nococeko, lukhetho olufanelekileyo kwindawo yokulungiselela ukutya.
Ukuba sele umbe loo galoni ezele sisiqingatha esipheleleyo sepeyinti emhlophe kwiprojekthi ethile awunakukukhumbula, makhe ndimise apho. Iikhabhathi zakho zasekhitshini zifanelwe ngcono kunoko. Thatha ixesha lokufunda ngeempawu ezahlukeneyo zepeyinti emhlophe, kwaye ukhethe leyo ilungele indawo yakho. Uya kuvuya xa ukwenzile.
Uyikhetha njani ipeyinti emhlophe yemibala yeeKhabhathi zasekhitshini
Ipeyinti emhlophe ePholileyo kunye neKhanyayo yeKhitshi
Ipeyinti emhlophe ePholileyo kunye neSoft
Eyona Paint ifudumeleyo kunye neBlue White
Eyona Paint imhlophe ifudumeleyo kunye ethambileyo
Uhlobo lwepeyinti oLigqibeleleyo ukuze ulisebenzise kwiiKhabhathi eziMhlophe zeKhitshi
Yonke imithunzi yepeyinti emhlophe iwela kwindawo ethile kumacala amabini: ipholile vs ifudumele, kwaye ithambile ngokuqaqamba. Imibala yepeyinti ‘epholileyo’ ineephantsi kweblue okanye imfusa. Imibala yepeyinti ‘eshushu’ inezithambeka ezimthubi okanye ezibomvu.
Izimvo zokukhumbula iminyaka emi-5 kuye
Jonga ezinye izinto kunye nokulungiswa ekhitshini lakho - ngaba zipholile okanye zifudumele? Iindonga ze-Buttery etyheli kunye netafile yekhitshi lepine ziya kuncedwa ngumhlophe ofudumeleyo. Izixhobo zensimbi ezingenasici kunye nemiphezulu yeetafile ziyakukhangeleka ngcono ngombala omhlophe opholileyo.
Ke, kuthekani ngokukhanya kuthambile? Unokuziqonda ezo nkcazo zisusela kwixesha lokugqibela owathenga ngalo iibhalbhu zokukhanya.
Abamhlophe abaqaqambileyo bafana nekhephu elisandul 'ukuwa - liyakhazimla, liyamangalisa, kodwa liyabamfamekisa kwiimeko ezingalunganga. Abamhlophe abamhlophe bathambile kwaye kulula emehlweni, njengokhilimu owugalela kwikofu yakho.
Ukuba ikhitshi lakho lifumana ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo, khetha umhlophe othambileyo. Ukuba ikhitshi lakho limnyama, ufumana ukukhanya ngokungangqalanga, okanye awunazo kwaphela iifestile, umbala omhlophe oqaqambileyo uya kukunceda ukhanyise ukukhanya ujikeleze igumbi ungakhange ujonge ii-retinas zakho.
Oko kusinika iindibaniselwano ezine ezinokwenzeka xa ujonge ipeyinti emhlophe efanelekileyo yeekhabhathi zekhitshi. Funda ukuze ufumane okona kulungileyo kuwo onke amacandelo.
UBenjamin Moore uMhlobisi oMhlophe (CC-20)
Ukuba ukhe wangena ekhitshini kwaye wakhazimla ngombala oqaqambileyo wekhabhathi, kukho ithuba elihle lokuba yayiyi-Decorator's White.
Le peyinti imhlophe ngaphezu kwayo nayiphi na into efumaneka kwindalo. Eyona nto ibonakalisa kakhulu, le peyinti iya kuhlutha konke ukukhanya kwaye uyijikeleze kwisithuba, isenze ikhitshi lakho likhazimle.
Ifota kakuhle, ke zenzele ubabalo kwaye uthabathe imifanekiso xa umsebenzi ugqityiwe- baya kuza bekulungele ukuba ufuna ukuthengisa indlu yakho.
Ilungele abantu abafuna ukucoceka, ukucoceka, ukuziva bengezelelwa ekhitshini labo. Awunayo ivenkile yakwaBenjamin Moore kufutshane nawe?
Iiresiphi zokupheka zekhekhe lomtshato
Zama USherwin Williams uSilingi oMhlophe oMhlophe (SW7007).
USherman Williams Alabaster (SW7008) Khetha le peyinti ye-creamier, efihlakeleyo, emhlophe emhlophe engabonakalisi kwaye ipholile.
I-Alabaster yinto ethambileyo yokuthinta, ukubamba okungaphezulu kwendalo, kune-White Decorator, kodwa isaza kujongeka ilungile ecaleni kwento emhlophe emhlophe kunye nezixhobo. Wuphephe lo mbala ukuba unetyheli eninzi kwizihombiso zakho zasekhitshini.
UBenjamin Moore ngokuMhlophe ngokuMhlophe (OC-117) . Ayimanga kakhulu, ayibonakalisi kakhulu, ayi tyheli kakhulu, ayinabuhlaza kakhulu… lo mbala ungabizwa ngokuba yi 'Goldilocks White', kuba ulungile embindini, kwaye ulungele phantse naliphi na ikhitshi.
Ukuba uziva uxakekile kwaye ufuna nje ukukhetha umbala kunye nokupeyinta, awunakukhetha umbala okhuselekileyo kunoSimple White.
UBenjamin Moore Cloud White (othengiswa njenge-CC-40 kunye ne-OC-130) . Lo mhlophe uthambileyo kulula ukuwujonga, uyabukeka emehlweni. Inemigca ephantsi etyheli engacacanga, iyenza ibonakale ityebile kwaye bukhrim.
I-Cloud White ibalasele ekhitshini efumana ukukhanya kwelanga kwendalo- umbala otyheli wendalo ekukhanyeni uya kwenza iikhabhathi zakho zikhanye. Ukuba unayo i-yellow, ebomvu, okanye i-orange kwisikimu sakho sokuyila ikhitshi, i-Cloud White ingeyakho.
Okokugqibela ukukhetha kukugqiba kwepeyinti. Ipeyinti ene-gloss ephezulu kulula ukuyicoca, kodwa gqabaza yonke into, isiqhulo kunye nokungafezeki, kubenza babe lukhetho olubi kwindawo yokusebenza kwezithuthi eziphakamileyo ekhitshini lakho.
Iipeyinti zeMatte, kwelinye icala, ziya kufihla umonakalo kunye nokungafezeki, kodwa azicimi kakhulu, ngenxa yoko nazo azifanelekanga kwiikhabhathi zasekhitshini.
Oku kukushiya ngeendlela ezintathu zokuphelisa ipeyinti: iqokobhe leqanda, i-satin, okanye i-glossy. Kuba iqokobhe leqanda lolona khetho luqhelekileyo kupeyinti lwaseludongeni, ndincoma i-satin okanye ipeyinti ecwebezelayo ukuze wenze entsha iikhabhathi ezimhlophe pop.
imiphezulu yeetafile zamatye amhlophe
Yeyiphi eyona nto uyithandayo kwimibala emhlophe yepeyinti yeekhabhathi zekhitshi? Sazise kwicandelo lamagqabaza apha ngezantsi. Esinye isikhokelo esihambelanayo ndwendwela Eyona mibala yepeyinti ekhitshini iphepha.
indlela yokwenza iidayimani zikhanye
iingoma ezisuka kumama ziye kunyana
ikhandlela elincinci lokuhlambela
uyifumana nini ilayisensi yakho yomtshato
isitayile se-acadian ekhaya